Aqoonsiga Masiixa, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Inta badan dadka ka weyn 50 sano waxay xasuusan doonaan Nikita Khrushchev. Wuxuu ahaa nin midab leh, dabeecad duufaantana leh, oo hogaamiya u ahaa Midowgii Soofiyeeti hore, oo kabaha kaga dhuftay garoonka markii uu la hadlayey Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Waxaa sidoo kale lagu yaqaanay sharraxaaddiisa ku aaddan in qofkii ugu horreeyay ee bannaanka jooga, kan la yiraahdo cosmonaut Ruush-ka ee Yuri Gagarin, "uu u duulay meel bannaan laakiin uusan halkaas ilaah ku arag". Marka laga hadlayo Gagarin laftiisa, ma jiro wax diiwaangelin ah oo uu ku sheegay inuu waligiis sidan oo kale soo saaray. Laakiin Khrushchev wuu saxnaa, laakiin maaha sababaha uu maanka ku hayay.
Sababta oo ah Baybalka laftiisa ayaa noo sheegaysa in qofna weligiis arkay Ilaah marka laga reebo mid, kaas oo ah Wiilka Ilaah ee Ciise. Yooxanaa waxaan ka akhrinaynaa: «Qofna weligiis ma arkin Ilaah; oo curadka ah, oo Ilaah yahay oo ku jira gacanta aabbaha, ayaa inoo sheegay isaga » (Yooxanaa 1,18).
Si ka duwan Matthew, Mark, iyo Luukos, oo wax ka qoray dhalashadii Ciise, Yooxanaa wuxuu ku bilaabayaa ilaahnimadiisa Ciise wuxuuna inoo sheegayaa in Ciise bilowgii yahay. Isagu wuxuu noqon doonaa “Ilaah inala jiro,” sida waxsii sheegyada ay sii sheegeen. Yooxanaa wuxuu sharxayaa in Wiilka Ilaah noqday nin wuxuuna ku dhex noolaa sidii mid innaga mid ah. Markii Ciise dhintay oo la soo sara kiciyey oo uu fadhiistay midigtii aabihii, waxa uu sii joogay aadanaha, oo ah ninka ammaanta leh, oo ka buuxay Ilaah oo ka buuxay ninka. Ciise qudhiisa, Baybalku wuxuu ina barayaa, waa wadaagga ugu sarreeya ee u dhexeeya Ilaah iyo aadanaha.
Jaceylka si buuxda buu u dhammeystiray, Ilaah wuxuu sameeyey go'aankii xorta ahaa ee uu ku abuuray aadanaha ee uu muuqaalkiisa ku abuuray oo uu teendhadiisa dhex dhigay. Waa qarsoodiga injiilka in Eebbe aad u daneeyo aadanaha isla markaana uu jecel yahay adduunka oo dhan - tan waxaa ka mid ah adiga iyo qof kasta oo aan og nahay oo aan jecel nahay. Sharaxa ugu dambeysa ee qarsoodiga waa in Ilaah muujiyo jacaylkiisa aadanaha isagoo la kulmaya aadanaha, isagoo la kulmaya midkeen kasta oo ka mid ah shakhsiyadda Ciise Masiix.
Yooxanaa 5,39, Ciise ayaa laga soo xigtay sida soo socota: "Qorniinka waad baadhaa maxaa yeelay waxaad u malayn inaad nolosha weligeed ah ku dhex jirtaan; Oo iyana waa aniga markay ii marag furayso; laakiin ma dooneysid inaad ii timaado inaad nolosha leedahay. » Kitaabka Quduuska ah ayaa inoo hagi doona Ciise, oo na tusaya in Ilaah naftiisa aad ugu xidhay Ciise xagga jacaylkiisa inuusan waligiis naga sii dayn doonin. Injiilka, Ilaah wuxuu inagu yiri: «Ciise waa mid ka dhexeeya aadanaha iyo mid leh Aabbaha, taasoo micnaheedu yahay in aadanuhu uu wadaago jacaylka Aabaha xagga Ciise iyo jacaylka Ciise u qabo Aabbaha. Markaa injiilku wuxuu noo sheegayaa: maxaa yeelay Ilaah aad buu kuu jecel yahay oo si aan kala go 'lahayn, iyo maxaa yeelay Ciise wuxuu horey u qabtay wax kasta oo aadan naftaada u qaban karin, hadda waad ka qoomameyn kartaa farxad, waxaad rumeysaneysaa inuu Ciise yahay Badbaadiyehaaga, naftaada. Diido, iskutallaabta kor u qaad oo raac.
Injiilku ma aha baaqasho ah in ugu dambayntiina nabad lagu tago ee waa cadho Ilaah, waa yeedh inaad aqbasho jacaylka aan dhamaadka lahayn ee Aabaha, Wiilka, iyo Ruuxa Quduuska ah iyo inaad ku faraxdo in Ilaah si shuruud la’aan ah kuugu jeclaaday daqiiqad kasta oo noloshaada ah. wuxuu leeyahay weligiisna ma joojin doono jacaylkaaga weligiis.
Uma arki doonno Ilaah muuqaal ahaan meel bannaan, waxkastoo aan ku arki doonno muuqaal ahaan halkan adduunka. Eebbe wuxuu ku muujiyaa indhaha iimaanka - rumaysadka xagga Ciise Masiix.